Ku saabsan DD Fasteners | DD Fasteners Trading Co., Ltd.
DD Fasteners Co., Ltd. waxay ku taalaa Degmada Yongnian, Handan magaalada, Gobolka Hebei, Shiinaha. Taasoo ah aruurinta cilmi baarista iyo horumarka, wax soo saarka, caadada, tijaabada, iibinta, dalacsiinta, shirkadaha dhoofinta dhoofinta.
Waxaan ka soo dhoofsannay dhammaan qalabyada Taiwan ama Gemany.
Ka sokow, waxaan sidoo kale haysannaa nidaam maarayn tayo oo dhameystiran oo saynis ah, koox xirfadlayaal R&D ah iyo karraaniyayaal farsamo. waxaan dhisnay casri, heer sare, heer sare, noocyo badan oo xajiyeyaal dhammeystiran oo khadadka waxsoosaarka, iyo wax soo saarka sanadkii ee shirkadeena waa in kabadan 50,000 oo tan. Waxaan had iyo jeer u dhignaa baahida macaamiisha iyo alaabada tayada sare inay tahay ujeeddadeena hawlgalka waxaanna ku helnay aqoonsi ballaaran warshadaha.
Qalabka is-qodida / shabaqa darbiga qallalan / shabaqa daboolka / mashiinka xaabada / shabaqa / Chipboard / Bolts iyo nuts iyo wixii la mid ah, kuwaas oo si wanaagsan looga iibiyay waddanka oo loo dhoofiyey Koonfur-bari Aasiya, Hindiya, Ruushka, Haskstein, Filibiin, Dubay iyo kuwa kale wadamada iyo gobolada. Waxaan si daacad ah u soo dhaweyneynaa macaamiisha iyo khubarada soo booqda shirkaddayada isgaarsiinta iyo hagista!
Himilada: inay ahaato astaanta koowaad ee warshadaha qaybaha heerka Shiinaha.
Ujeeddada: in laga caawiyo shaqaalaha sidii ay u xaqiijin lahaayeen himilooyinkooda nololeed iyo in laga caawiyo sidii ay u gaari lahaayeen yoolalka istiraatiijiyadeed.
Falsafadda: in lagu abuuro ganacsi aamin ah, lagu horumariyo ganacsi tayo leh, dhaqan xoog leh, geedo magac leh, iyo hibo. Ujeeddo: inaad ku noolaato suuqa, u adeegto horumarka, tayada iyo kalsoonida.
Qiyamka: xaqiiqsada xaalada guuleysiga ee shirkadaha, shaqaalaha, macaamiisha iyo bulshada.
Maareynta: maaraynta aadamiga, hawlgal suuq geynta.
Cilmiga ganacsiga: hal abuurka iyo hal abuurka.
Qaabka shirkadeed: iskaashiga waxqabadka leh waa mid hufan.